နောက်ထပ် LEGO ရဲတိုက်မော်ဒယ် LEGO ပေါ်တွင် 10K ရောက်ရှိခဲ့သည် Ideas
နောက်ထပ်ရဲတိုက်မော်ဒယ် LEGO အပေါ် 10K ရောက်ရှိခဲ့သည် Ideas
02 / 02 / 2021 02 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 2919 Views စာ0မှတ်ချက် ရဲတိုက်, Classic ရဲတိုက်, ဒံယလေကဗန် Zonneveld, သစ်တော, Frank Boor, Ideas, Lego
Lego အခြားအလယ်ခေတ်မော်ဒယ်လ်တစ် ဦး သည်မှော်ဘီမဲ ၁၀၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သဖြင့်ရဲတိုက်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည် Lego Ideas.
ဒံယလေကဗန် Zonneveld ရဲ့ Brickwood သစ်တော၏ရဲတိုက် သုံးပတ်ကျော်အတွင်းထောက်ခံမှုရရှိခဲ့ပြီးယခုပြန်လည်သုံးသပ်ရေးအဆင့်သို့တိုးတက်လိမ့်မည် Lego Ideas အသင်းအဖွဲ့။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောအသေးစိတ်ဖန်တီးမှုသည်ရှေးဟောင်းသစ်တောများကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာပြီး၊ အခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ ထောင်နှင့်လျှို့ဝှက်ဂူတစ်ခုတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
၎င်းသည် crowdsourcing platform ပေါ်တွင်တည်ဆောက်သူများ၏ပထမဆုံးကောင်ဘွိုင်ပွဲမဟုတ်ပါ၊ သူ၏ယခင်ရဲတိုက်ရေးရာစီမံကိန်း သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက် ပထမ ၂၀၂၀ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်မဲ ၁၀၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။
သူ၏ဒုတိယကြိုးပမ်းမှုသည်ယခုပြန်လည်သုံးသပ်ချိန်၌ (အကယ်၍ ရေတွက်လျှင်) တတိယရဲတိုက်စီမံကိန်းကိုမှတ်သားသည် Artem Biziaev ရဲ့ Hyrule ရဲတိုက်နောက်ထပ်သုံးခုလက်ရှိတွင်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်နေစဉ်။ ) ဒုတိယ နှင့် တတိယ 2020 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဖရန့် Boor's အပါအဝင် Classic ရဲတိုက်။ ဒါကပြန်လာဘို့ကြီးမားတဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုထွက်ရှိပါတယ်အကြံပြုထားသည် Lego ရဲတိုက်အားလွှတ်ပေးခြင်းဖြင့်သတိပေး (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအားဖြည့်) 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ.
ဟုတ်လား Lego NASA Apollo Saturn V ၏အောင်မြင်မှုကို ၂၁၃၀၉ ၏အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည် (ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ) 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို) နှစ်နှစ်အကြာတွင်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် ၁၀၂၆၆ NASA NASA Apollo 10266 Lunar Lander, ဒါကြောင့်အဘို့အကျိန်းသေထုံးစံရှိပါတယ် Ideas အလားတူ - ရေးရာအစုံများအတွက် launchpad အဖြစ်သရုပ်ဆောင်အကွာအဝေး။
ယခုဒန်နီယယ်၏အထင်ကြီးလောက်သောတည်ဆောက်မှုသည် ၂၀၂၁ တွင်ထပ်မံတိုးပွားလာသောပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်အခြားသောစီမံကိန်း ၁၈ ခုနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဒီမှာစာရင်းအပြည့်အစုံပါ။
← သုံးသစ် LEGO Star Wars အစုံ LEGO.com မှဆက်ပြောသည်
LEGO အသိအမှတ်ပြုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်သည် Amelia Earh ၄၀၄၅၀ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်art အခွန်ဆက်လက်ဆောင် - နှင့်အတူ - ဝယ်ယူ →